Ku simaha Ra’iisul wasaaraha dalka oo kulan la yeeshay Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna ku simaha Ra’iisul wasaaraha Dalka Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa Maanta waxaa uu kulan la qaatay Safiirka Dowladda China u fadhiya Dalka Soomaaliya Warsame Geel Jire oo ay ka wada hadleen Arimo dhowr ah oo ay ka mid tahay Xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda China .
Waxyaabaha ay isla soo qaadeen Labada Mas’uul ayaa ka waxaa ka mid ah Ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka, gaar ahaan dayactir lagu samaynayo Xarumihii China ay horey uga dhistay dalka oo uu ka mid yahay Tiyaartarka Qaranka In dowlada Soomaaliya diyaariso baahiyaheeda, si gudi Dowladda China u soo diraysyo dhawaan ay qiimayn ugu sameeyaan baahiyahaas iyo sidoo kale Xarumaha Muhiimka ah Ee Dowladda oo hadda bur bursan China ay dib u dhis ku sameyso.
Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa uga Mahad celiyay Safiirka Shiina Ee Soomaaliya Dadaalka ay Dowladda China ku garab taagan tahay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo ku bogaadiyay in ay sii wado dadaalkaasi bulshada Soomaaliyeedna ay u ogtahay kuna amaaneyso.
Safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya Warsame Geel Jire oo isna hadlay ayaa waxaa uu ku simaha Ra’iisul wasaaraha uga mahad naqanay kulanka iyo soo dhaweynta uu u sameeyay waxaana uu balan qaaday in dowladda Shinuhu kordhineyso dadaalada ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ku garab taagan tahay.
Ku simaha Madaxweynaha dalka oo hambalyo u direy Ciidanka Cirka Munaasabadooda awgeed